Quaint and Quirky Naqshadaha Kafateeriyada Gudaha - Joornaalka Naqshadeynta
Naqshadaha Kafateeriyada Gudaha
Naqshadaha Kafateeriyada Gudaha Quaint & Quirky Dessert House waa mashruuc muujinaya vibe casri ah oo taabasho dabiici ah oo si sax ah u muujinaya dawooyinka macaan. Kooxdu waxay rabaan inay abuuraan goob runtii u gaar ah oo waxay fiirinayeen buulkeedii shimbiraha si loo dhiirrigeliyo. Fikradda ayaa markaa nolosha lagu keenay iyada oo loo marayo soo uruurinta qolyo fadhiyo ah oo u adeega astaamaha udub dhexaadka u ah bannaanka. Qaabdhismeedka firfircoon iyo midabada dhammaan qeybaha muruqyada waxay wadaagaan caawinaad si loo abuuro dareen isku wada mid ah oo ku xiraya dabaqa iyo mezzanine xitaa sida ay u siinayaan furitaanka dareen-qabashada.
Magaca mashruuca : Quaint and Quirky, Magaca naqshadeeyayaasha : Chaos Design Studio, Magaca macmiilka : Bird Nest Secret.
Naqshadaha Kafateeriyada Gudaha Chaos Design Studio Quaint and Quirky